कृष्णसिंह लाेथ्याल काठमाडौं, १३ चैत
विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)ले संसारका मानिस त्रसित छन् । आममानिसको निद्रा हराएको छ । कोरोनाबाट बच्न विश्वका धेरै मुलुकले लकडाउनको नीति लिएका छन् ।
नेपाल सरकारले समेत १ साताका लागि देश लकडाउन गरेको छ । मंगलबारबाट गरेको लकडाउन १ साता रहनेछ तर परिस्थितिअनुसार बढ्न सक्ने पनि देखिन्छ । भारतले पनि बढाएर २१ दिन पुर्‍याएको अवस्था छ ।
लकडाउन एक प्रकारको कर्फ्यू हो, जहाँ कार्यालय, पसल र सवारी साधनमा रोक लगाइन्छ र सुरक्षाकर्मी परिचालन हुन्छन् । तर, यो युद्धकालीन जस्तो भने हुँदैन । नेपालको इतिहासमा लकडाउनको अभ्यास यो पहिलो पटक हो, जहाँ नेपालको आकाशमा पहिलो पटक जहाज उडानमा समेत रोक लागेको छ ।
यसअघि २०५२ सालबाट तत्कालीन माओवादीले गरेको सशस्त्र विद्रोहका बेला सङ्कटलकाल घोषणा गर्दै विभिन्न ठाउँमा कर्फ्यू लगाइएको थियो ।
तथापि, देश पूरा लकडाउन भने गरिएको थिएन । अहिले देश विश्वयुद्धभन्दा ठूलो सङ्कटमा गएजस्तै पूरा लकडाउन छ । र, यो आवश्यकसमेत छ ।
पहिलो पटक चीनको वुहानमा देखिएको कोरोना अहिले युरोपेेेली मुलुकमा थामी नसक्नुको अवस्थामा फैलिएको छ ।
विश्वका करिब २ सय देशमा यसको प्रभाव छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन । हाल नेपालमा ३ जना कोरोना संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ । भलै, कोरोनाकै कारण अहिलेसम्म नेपालमा केसैको मृत्यु भएको भने छैन ।
विभिन्न माध्यममा आएका समाचारलाई आधार मान्ने हो भने युरोपेेेली देश इटाली र स्पेनमा जुन प्रकारको महामारी फैलियो र जुन नियति भोगिरहेका छन्, त्यो पूर्वतयारी नहुँदाको परिणाम भनिएको छ ।
अहिले इटाली र स्पेनमा कोरोनाका कारण मर्नेको संख्या दैनिक ६ सयभन्दा बढी छ ।
लकडाउन पालना गराउनै हम्मेहम्मे
अहिले देश लकडाउनको अवस्थामा छ । सरकारले अपिल गरेको छ, ‘सकेसम्म घरघरमै बसेर सरकारलाई सहयोग गर्नू, आफू सुरक्षित रहनूू र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न मद्दत गर्नूू ।’
तर, आममानिसले त्यो पालना गरेका छैनन् । पहिलो दिन लकडाउन भनेको के हो ? कस्तो हुँदो रहेछ ? भनेरै कतिपय मानिस सडकमा आए ।
कतिपय मानिसलाई सुरक्षाकर्मीले सम्झाएरै घर पठाउनुपर्‍यो । आज लकडाउनको तेस्रो दिनसम्म पनि त्यही क्रम दोहोरिइरहेको छ ।
मंगलबार लकडाउन उलङ्घन गर्ने १ हजारभन्दा बढी सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको ट्राफिक प्रहरीले आज बिहान मात्र १ सय ३७ सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको छ ।
भलै, यो सुरक्षाकर्मीको दायित्वभित्र पर्ला तर यो असल समाजको उदाहरण भने हुँदै होइन । यतिबेला तपाईंं हामी सबैले सरकारलाई सहयोग गर्ने नै हो ।
यो सहयोग नै तपाईं हाम्रो सुखी र समृद्ध नेपालको परिकल्पनाको आधार हो । लकडाउनको पहिलो दिन (मंगलबार) केही नरम तरिकाले सडकमा उत्रिएको प्रहरी बुधबारबाट केही आक्रामक देखिएको छ, जो आवश्यक पनि छ ।
प्रहरीका गुनासै गुनासा
प्रहरीले सकेसम्म लकडाउनको पूर्ण पालना गराउने प्रयास गरेको छ । देशभरका प्रहरी फिल्डमा छन् । उनीहरूसँग पनि कोरोनाबाट जोगिने पर्सनल प्राटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पीपीई) भने छैैन ।
तर, उनीहरू २४ घण्टा लकडाउन पालना गराउन भन्दै सडकमा खटिएका छन् । सकडमा निस्केका मानिसहरूलाई घरबाट ननिस्कन सुझाउँदा दालमोठ र चाउचाउ खोज्न निस्केको भन्दै प्रहरीलाई उल्लु बनाउन खोज्ने गरेको गुनासो प्रहरीको छ ।
बिहानदेखि नै लकडाउनको पालना गर्न ललतिपुरको लगनखेलको सडकमा उभिइरहेका एक प्रहरीले भने, 'कतिपय मानिस लकडाउन कस्तो हुँदोरहेछ भनेर हेर्न निस्केको जवाफ दिन्छन्, कोही चाउचाउ किन्न हिँडेको भनेर जवाफ दिन्छन् । घर फर्किन भनेपछि उल्टै के कर्फ्यू हो भनेर थर्काउन खोज्छन् ।’ लकडाउन प्रहरीको लागि होइन तपाइ हाम्रै लागि हो यसकाे पालना गरौ‌‌ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत १३, २०७६, ०१:३२:००